Mozika famaritana avo lenta amin'ny alàlan'ny iTunes Mety ho avy tsy ho ela | Vaovao IPhone
Vaovao IPad | | iPad, iTunes
Araka ny tatitra vao haingana, Apple dia mety mikasa ny hampiditra fampidinana raki-peo 24-bit amin'ny alàlan'ny iTunes amin'ny volana Jona. Toa ny orinasa no miresaka amin'ny marika firaketana samihafa hanatsarana ny kalitaon'ny mozika amidy.
Amin'izao fotoana izao, ny mozika amidy amin'ny iTunes dia ao anaty endrika 16 lossy ACC voahodidin'ny 256 kbps ho an'ny ahenao araka izay azo atao ny habeny. Raha ny mozika 24-bit dia avo kokoa ny kalitaony, saingy hitombo be ihany koa ny habeny.
Amin'izao fotoana izao, ny mozika ao amin'ny iTunes Store dia manana kalitao avo mifandraika amin'ny fivarotana hafa, na dia izany aza tian'ny mpanjifa ny endrika toy ny FLAC, izay mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny mpilalao haino aman-jery. Ho an'ireo tsy mahazatra dia heverina ho endrika tsy misy fatiantoka izay tsy very kalitao rehefa navadika avy amin'ny loharanom-peo, ohatra CD. Ny endrika lossy (ireo izay very kalitao rehefa niova fo) dia ohatra MP3, APE, AAC, sns.
Apple koa manana endrika tsy misy fatiantoka manokana antsoina hoe ALAC, fa misy ireo manamafy fa tsy dia mandaitra toa ny FLAC. Ny tombony an'io dia raha manana fitaovana iOS ianao na mihaino mozika amin'ny alàlan'ny iTunes dia hifanaraka ireo. Raha ny marina, roa taona lasa izay dia nandefa ampahany tao amin'ny iTunes antsoina hoe "Mastered for iTunes" i Apple izay misy kalitao avo lenta kokoa noho ireo AAC ireo hira natolotra.
Tokony holazaina fa ny kalitao avo kokoa amin'ity karazana fisie ity raha oharina amin'ireo ankehitriny mety tsy ho hitan'ny mpihainoTsy lazaina intsony raha tena vonona handoa vidiny avo lenta kokoa ny mpanjifa raha araka izay azo atao. Na izany na tsy izany, ireo izay nitaky kalitao lalandava amin'ny mozika iTunes, hanome toky azy ireo ity fampahalalana ity. Ny daty voatondro hanaovana an'ity ho fanombohana ity amin'ny Jona ho avy izao, mety mandritra ny WWDC.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » iTunes » Ny mozika famaritana avo lenta amin'ny alàlan'ny iTunes dia mety ho avy tsy ho ela
Azonao atao izao ny milalao lalao Nintendo DS amin'ny iPhone tsy misy jailbreak